Date My Pet » Nei Usingafaniri Kuita Edza Dating Munhu Ko Type Your
kubudikidza Bridget Sirtonski
Nei Usingafaniri Kuita Edza Dating Munhu Ko Type Your
Last updated: Sep. 26 2020 | 2 Maminitsi verenga
Ever aiva nguva apo shamwari dzako kana mhuri avo, vachida kuisa iwe pamusoro musi nemunhu vanoziva, kumbira zvauri kuenda nokuda?
Anenge munhu wose ane mhosva naro-vachiti ivo vane mhando kana zvinodiwa kuroora nava-.
Ndinonzwa vanhu kutaura nezvazvo dzose nguva: "Ini chete zuva unyanzvi-mhando vanhu nokuti ndiri mifananidzo" kana "Ini unosarudza dating vanhu vari kuminda dzakafanana basa sezvo ini."
Asi chii kana uri yakatarisana hove huru nokuti hadzikwani yenyu "yakanaka mhando"?
Izvi zvinogona kuitika nokururamisira kazhinji, kunyanya paIndaneti kufambidzana. Munouya kuyambuka Profile kuti anobata ziso rako, asi pashure pokuverenga Stats dzavo iwe nokukurumidza mberi nokuti hairevi yenyu yakanaka naye shoma. Saka yako mhando munhu murefu, tsandanyama varume asi profile anoti iye chete 5'6 "uye chete zvine mwero kufarira muviri kana wako mhando ndiyo tsvukuruka, vakadzi Eastern Europe uye iye ari Brunette Australian. Havangoerekani vapiwa kunyora munhu kure nekuti havazivi pakarepo aratidzike mutambo.
Nei uchinzwa unofanira kudanana yakananga mhando munhu?
Unofanira kumisa akwirwe nemunhu kunobva zvavanofarira, zvitendero uye zvinangwa. Kana pfungwa yakawandisa awana munhu aenderane mitemo yaibatsira Unoda kutevera apo kudanana, unogona vangavhiringidza mikana yako panguva angangokuvadza kuvaka ukama huru.
Kana iwe chete bvuma kudanana kwenyu mhando, unogona chete kuva kudzokorora ekare masaisai. Kana wakambotamba yomusi kwakadaro munhu kwemakore gumi apfuura uye hakuna ukama vakashanda panze, zvichida unofanira uongorore zvakare chete chete kufambidzana kwenyu nzvimbo mhando. Kana uchifambidzana nomumwe kwakadaro munhu pamusoro uye pamusoro, ukama kazhinji ane magumo migumisiro.
Achifambidzana chaiwo mhando kunogona kuva akasununguka uye oneka. Kudanana nemunhu asiri wako mhando, munhu akasiyana, Angabvumira iwe mukana kuedza zvinhu zvitsva uye vowana upenyu hutsva zvakaitika. Kana ukaedza kufambidzana munhu ane zvinhu zvakasiyana kupfuura iwe, uchikwanisa kuedza mabasa matsva unogona rinozondinakidza. Kudanana munhu yakasiyana nhaka kupfuura rwenyu kunogona vachikubvumira kuwana zvokudya zvitsva uye tsika.
To pachena, Ndiri kureva imi kuedza kufambidzana vanhu dzinotenda zvakawanda zvakafanana womukati chinoumba tsika kwamuri (akadai kuvimbika, Kutendeka kana rupo), pe- pakusarudza vamwe yakavakirwa zvinoonekwa nevanhu (akadai chitarisiko, urudzi kana chinzvimbo). Unofanira kunamatira kutevera vamwe dzinotenda zvakafanana moyo netsika. Kana uchida kugara pasi ari makore mashoma ane mhuri, musatanga kufambidzana vanhu vasina vavariro kutanga mhuri. zvisinei, kana ukaona munhu irege kukodzera yenyu yakanaka mhando naye panyama, asi imi hamuna taigovana refu zvinangwa uye zvitendero, zvichida unofanira kuvapa mukana.
Shure kwezvose, hautombowani kuziva machisi yenyu yakarurama kungava.
Nzira Yokukunda Pashure Break Up
5 Check Points For Total Safety uye Security pamwe Online Dating
12 Tips For Kunobudirira Singles
On the Rebound – Ko kufambidzana paIndaneti nzira yakarurama kuenda?